ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ။ – Noor Health Life
World Meningitis Day ကို ဧပြီလ 24 ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျင်းပသည်။ ဤနေ့တွင် အဖျားရောဂါ၏ လက္ခဏာများ၊ အကြောင်းတရားများ၊ ကုသခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ညီလာခံများကို ကျင်းပကြသည်။ အဖျားရောဂါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် နှစ်စဉ် လူတစ်သန်းကျော်ကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါသည် အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အချိန်မီကုသမှုခံယူရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။အဖျားသည် အန္တရာယ်ရှိသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိပါက ရောဂါပိုးရှိသူကိုသေစေနိုင်သောကြောင့် သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
သဘာဝတရားသည် လူသားတို့၏ ဦးနှောက်နှင့် cerebellum အတွက် အကောင်းဆုံး အစီအစဥ်များကို ဖန်တီးထားပြီး ၎င်းတို့ကို အမြှေးပါး (၃) ခုတွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနှင့် ရောဂါများကို ကင်းဝေးစေပါသည်။ထိုအမြှေးပါးများတွင် သေးငယ်သော ရောဂါပိုးများသည်ပင် ရောဂါများစွာကို ဖြစ်စေသည်။ ဤအမြှေးပါးများသည် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ၊ သွေးကြောထဲသို့ဝင်ရောက်သောပိုးမွှားများ၊ နှာခေါင်းနှင့်နားများ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်းတို့ကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်။
1. ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါတွင်၊ လူနာသည် ဦးစွာအဖျားကြီးလာသည်။
2. ကလေးတွင် အဖျားရှိလျှင် အဆက်မပြတ် ငိုသည်။
3. သင်စားချင်သောက်ချင်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။
4. အဖျားပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ ဝေဒနာရှင်သည် တက်ခြင်းစပြုလာသည်။
5. ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် အနီကွက်များ ပေါ်လာသည်။
6. မျက်လုံးထဲတွင် ပျင်းရိခြင်း ပျောက်သွားသည်။
7. အရေးကြီးဆုံး လက္ခဏာ တစ်ခုမှာ လည်ပင်းကို လှည့်မကြည့်ဘဲ လည်ပင်းကို ကောင်းစွာ မကုသနိုင်ဘဲ လူနာသည် လည်ပင်းကို မမြှောက်နိုင်ပေ။
ဂျနီဗာ- ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် လူငါးဦးလျှင် တစ်ဦးသည် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါနှင့် အခြားအကြောင်းများကြောင့် လာမည့်နှစ်များအတွင်း အကြားအာရုံပြဿနာများ ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူအများအပြားသည် အကြားအာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာ
သူ့အဆိုအရ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါသည် အကြားအာရုံနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောကြောင့် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါသည် အကြားအာရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိမရှိခြင်းမှာ အလွန်ပြင်းထန်နိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုအရ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါသည် ဦးနှောက်နှင့် အကြားအာရုံဆဲလ်များကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေပြီး မက်ဆေ့ခ်ျကို ဦးနှောက်သို့ ဖြတ်ထုတ်သွားစေသည်။
အများပြည်သူနေရာများတွင် ဆူညံသံများကို လျှော့ချပြီး အချိန်မီ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးခြင်းဖြင့်သာ ဤပြင်းထန်သော အခြေအနေအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း WHO မှ ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
WHO မှ ထုတ်ပြန်သော ပထမဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြားနာမှု အစီရင်ခံစာတွင် “လာမည့် ဆယ်စုနှစ် သုံးခုအတွင်း နားမကြားသူဦးရေ 1.5% ကျော် တိုးလာမည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ လူငါးဦးလျှင် တစ်ဦးမှာ အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းမှု ရှိလိမ့်မည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“အကြားအာရုံပြဿနာများ တိုးလာမှုသည် လူဦးရေစာရင်း၊ ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုနှင့် လူဦးရေ လမ်းကြောင်းများ တိုးလာခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်” ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်လှမ်းမမီမှုနှင့် ဝင်ငွေနည်းနိုင်ငံများတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် အကြားအာရုံဆုံးရှုံးရသည့်အကြောင်းရင်းကိုလည်း ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် “ထိုနိုင်ငံများရှိ လူများ၏ 80% သည် အကြားအာရုံပြဿနာရှိကြပြီး အများစုမှာ ဆေးဝါးကုသမှုမခံယူကြဘဲ ချမ်းသာသောနိုင်ငံများတွင် လူဦးရေတိုးပွားလာမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို လက်လှမ်းမမီကြပါ။” နောက်ထပ်မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများနှင့်အတူ Noor Health Life ကို အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါသည်။ noormedlife@gmail.com